Global Voices teny Malagasy » Rosia: Hetsi-panoherana An-kerim-po sy ny Lalàna · Global Voices teny Malagasy » Print
Rosia: Hetsi-panoherana An-kerim-po sy ny Lalàna
Voadika ny 30 Avrily 2019 20:12 GMT 1	 · Mpanoratra Veronica Khokhlova Nandika imanoela fifaliana
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifidianana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna, Mediam-bahoaka, Politika, Saripika, Tanora, Zon'olombelona
(Fanamarihana: lahatsoratra anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2006)
Tamin'ny 17 Novambra 2006, nankatò volavolan-dalàna iray manafoana ny tahàm-pandraisana anjara farany ambany indrindra (20%) ho an'ireo fifidianana rehetra any Rosia ny Duma Rosiana. Androany, nanao sonia izany ho lalàna ny filoha Vladimir Putin.
Tamin'ny 23 Novambra, nanohitra ilay fiovàna mananontanona ny tanora roa mpikatroka – Ilya Yashin sy Maria Gaidar – tamin'ny fandaniany ora iray sy sasany nihantona tamin'ny tady teny amin'ny tetezana iray tao Moskoa manatrika an'i Kremlin sady nampidera faneva 10 metatra nitondra ny soratra hoe : ”AVERENO AMIN'NY VAHOAKA NY FIFIDIANANA, RY LELIKAMATY IRETO AH!”
Notsoahan'ny mpamonjy voina teo amin'ilay tetezana i Yashin (mpampiasa LJ yashin) sy i Gaidar (mpampiasa LJ m-gaidar), nosamborin'ny polisy ary samy nasain'ny fitsarana nandoa lamandy 500 robla (eo amin'ny 20$).
Namoaka sary tatitra iray  mikasika ilay hetsi-panoherana an-kerim-po ny mpampiasa LJ, “50×50″; nanome rohy mankany amin'ilay lahatsary ao amin'ny RuTube.ru ny Very Russian.
Namoaka fanamarihana fohy mikasika ny fanapahankevitry ny fitsarana hanome lamandy ho azy sy i Yashin i Gaidar – mpandrindra ny hetsika Da! (”Eny!”) ary zanaka vavin'ilay Praiminisitra mpisolo toerana vonjimaika tamin'izany fotoana, egor Gaidar  -, ary ireto misy sasany tamin'ireo valinteny  azony (ROS):
kreatiff: Tokony nifanaraka tamin'izy ireo teo noho eo ianao – mety 200 ihany no naloanao… ary mety afaka nialanao ny fandavahana ny fahazoandàlanao mamily ))))
prava3: Afaka manomboka raharaham-barotra ianao. 1.000 robla ho an'ny zo hihantona eo amin'ny Reniranon'i Moskoa, 500 ho an'ny fanjakana, ny ambiny ho an'ilay mpandraharaha ara-barotra. 🙂 Hanihany. Raha ny marina, tsara fiafarana ihany ilay izy.
mendkovich: ie, tena tsara vintana ianao. Nisy olona sasany nanokafana raharaham-pitsarana ara-keloka noho ny fanaovana hetsika toy izany ihany.
nah42: Ah, tsara be. Mahazo fakandrivotra maimaimpoana ny zanaka [Ampihantaina, omena sakafo be loatra] an'ireo ray aman-dreny malaza. Ary ho an'ireo olon-tsotra mety maty – fonja. Toy ny mahazatra ihany ny zava-drehetra. […]
domohozjayka: Tsy maintsy alefa any am-ponja daholo angaha izy rehetra sa inona e? Ao anatin'ny hatezerana sy fialonanao, adinonao fa raha toa tsy ilain'ny tenanao manokana ilay fifidianana, misy kosa ireo hafa tsy mitovy hevitra amin'izany.
harding1989: Eny. Mazava ho azy, hiverina ho azy ny fifidianana satria nanapa-kevitra ny hihantona teo ambonin'ny renirano ny mpikambana roa avy ao amin'ny ”fahatanorana volamena”. Toy ny manofahofa hazo majika. Tsy anavahana na iza na iza ny lalàna.
Tao anatin'ilay resaka etsy ambony, resahan'ireo olona roa mpampiasa LJ ny mikasika ny toe-javatra iray hafa izay nitovy ny tao anatiny ary samihafa ny vokany: tamin'ny volana May 2006 nosaziana an-tranomaizina mandritra ny telo taona sy tapany i Olga Kudrina, mpikambana avy tao amin'ny Antoko Boltsevika Nasionalin'i Eduard Limonov , noho ny fihanihana ny Hotely Rossiya ary fanantonana faneva izay nilaza hoe ”Putin, mialà amin'ny nahim-ponao” teo amin'ny ilany manoloana ny Kremlin.
Tamin'ny fanoratana taratasy feno fihetseham-po malalaka  (ROS) ho an'i Sergei Podoprigorov, ilay mpitsara nanameloka an'i Kudrina, nasongadin'i Yashin – izay mitarika ny sampana tanora ao amin'ny Antoko Yabloko  – ny tsy rariny :
Tsy hanainga ny lafiny ara-moraly amin'ilay olana aho – tsy misy ilàna izany, azoko antoka. Raha toa ka mora aminareo ny manimba ny fiainan'ireo tanora noho ny toerana ara-tsivily misy azy ireo fotsiny, dia fotoana lany fotsiny ny fiantsoana ny feon'ny fieritreretanareo.
Mazava be fa ny Mpitsara Pugachev [izay nampandoa vola an'i Yashin sy i Gaidar] dia naka ity fanapahankevitra ity araka ny lalàna sy ny fahaiza-misaina. Fa inona no nitarika anao tamin'izany, ry Sergei Gennadievich, rehefa tsy nireritreritra in-droa nialohan'ny nandefasanao olona mitovy taona amiko any am-ponja noho ny fandikana mitovy amin'izany ihany?
Inona no mba tao an-tsainao rehefa nanao sonia ilay didim-pitsarana ianao?
Iray ary tokana ihany no antony hitako tamin'izany fanapahankevitrao izany: tsy inona fa dia kanosa lahy ianao. Mazava ho azy, niantso anao izy ireo ary nangataka anao hanafonja an'i Kudrina […]. Mazava ho azy, voahelingelin'ilay didim-pitsarana ianao tao anatin'ilay [fandinihana] kelinao. Mazava ho azy, tonga saina ianao fa amin'ny fandefasana ireo olona ireo any am-ponja, hanao heloka, saingy ny famelàna azy ireo handeha kosa dia hanaisotra anao amin'ny sezanao mafana tsara.
Angatahako anao mba hilaza ampahibemaso hoe diso ianao ary miala amin'ny toeranao. Olona mahamenatra ny rafi-pitsarana Rosiana ny olona toa anao. Ary raha mihevitra fa hanafaka anao amin'ny fitazonana andraikitra tsy afaka ialàna amin'ny heloka nataonao ireo lehibenao ao Kremlin ireo, aza miantehitra amin'izany.
Hahazo izay sahaza anao ianao.
Ireto misy fanehoankevitra vitsivitsy (ROS):
arkashamos: Angamba ny antony dia ianao, Iliya, no mpitarika ny tanora ”Yabloko” ary i Masha Gaidar dia zanaka vavin'i Yegor Gaidar. Raha ohatra ka nandefa anareo roa tany am-ponja nandritra ny telo taona ry zareo, ho tabatabaina be ao Rosia sy manerana ny tany izany. Ary iza no mahalala […] io vehivavy io? Ny namany ao amin'ny antokony ihany sy i Edichka Limonov, izay hita mibaribary fa tena tsy miraharaha ireo zazalahy sy zazavavy nosintoniny [ho ao amin'ny antokony] mihitsy.
yashin: Ity no fampiasana ny lalàna amin'ny fanavakavahana.
sorex: Miombon-kevtra aho. Ay, ary efa miresaka izany ihany isika, vonona ve ianao [handeha any am-ponja ]?
newreft: Nalefa tany amin'ny zanatany nandritra ny valo taona i Khodorkovsky . Nisy tabataba be tao Rosia (nitranga saika tany amin'ireo renivohitra lehibe rehetra ny fihaonana, na tsy dia nisy olona nanatrika izany aza). Mbola nisy tabataba bebe kokoa noho izany aza [ivelan'i Rosia]. Ka inona ary? Nisy fiantraikany ve izany? Mety ho saika toa izany ihany ny an'i Ilya sy Masha. Ka tsy izay izany no antony.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/30/136802/
 sary tatitra iray: http://usachev.livejournal.com/15484.html
 egor Gaidar: http://en.wikipedia.org/wiki/Yegor_Gaidar
 sasany tamin'ireo valinteny: http://m-gaidar.livejournal.com/37379.html
 taratasy feno fihetseham-po malalaka: http://yashin.livejournal.com/371547.html
 Antoko Yabloko: http://en.wikipedia.org/wiki/Yabloko